China Kunze kwekushongedza bronze mermaid mvura tsime chivezwa chiri kutengeswa fekitori uye vagadziri | Atisan Anoshanda
Kunze kwekushongedza ndarira mermaid mvura tsime chivezwa chiri kutengeswa
Keyword: Mermaid chivezwa
TAG: Mermaid Zvidhori uye Dolphin Kutengesa Bronze Mermaid uye Dolphin Kuvezwa Hupenyu Hurefu Bronze Mermaid Chiumbwa Kunze kweBhuronzi Mermaid Chiumbwa
yendarira art mermaid yemvura tsime chivezwa
ndarira, ndarira, machena, Simbi
Kunze / Bindu Kushongedza
Ndarama, ndarira nendarira
H: 100-200cm kana yakagadzirirwa
Furo mukati uye mabhokisi emapuranga
100% Ruoko Rwakavezwa
Tsime remvura Tsime
Imukati uye Kunze Kushongedza
Resin / Bronze / Mhangura / Brass
Yakajairwa Kureba 1.3M kusvika 1.8M kana Yakagadziriswa
Yekutanga ruvara / shinny goridhe / akateedzera yekare / girini / nhema
Kushongedza kana chipo
Yakagadzirwa nemaoko neSurface Polishing
inoshanda nekushisa kubva -20℃ kusvika makumi mana℃. Kure kure nechimvuramabwe, zuva rinowanzo kunaya, inorema nzvimbo yechando.
Yeimba yemhuri / yemukati / yetembere / yemamongi / fane / yepasi scape / theme nzvimbo uye nezvimwe
Shandisa Trade Assurance Kuti Uwane Favor Yakawedzerwa! Kana naL / C, T / T.
Tinogona kupa bronze busts chifananidzo, hupenyu saizi chifananidzo, chinamato chifananidzo, mary chifananidzo, Jesu chifananidzo, ngirozi chifananidzo, david chifananidzo, buddha chifananidzo, guanyin chifananidzo, mhuka chifananidzo, shumba yendarira chifananidzo, shumba musoro chifananidzo, bhiza chifananidzo, shumba chifananidzo, nzou chifananidzo, gondo chifananidzo, chisina kupfeka mukadzi chidhori, chakashama murume chifananidzo, sexcy chifananidzo, gadheni chifananidzo, mwana kid chifananidzo, yendarira vhasi, yendarira ikholamu & mbiru, yekunze chifananidzo, zvemukati medu chifananidzo, mukomana ane imbwa chifananidzo, mermaid chifananidzo, chendarira kana chendarira tsime, mwenje chifananidzo, chifananidzo, coffe tafura chifananidzo, chivezwa chesimbi isina tsvina uye zvichingodaro
Iyo Nhoroondo Nezve Mermaid
Sekureva kwengano, iyo mermaid yakavakirwa pachiuno, mazhinji acho vakadzi vakanaka mumuviri wepamusoro, uye yakanaka hove ine zviyero mumuviri wezasi. Muviri wese uri kuyedza uye nyore kupukunyuka nekukurumidza. Vatengi vazhinji vanofarira ngano iyi inoshamisa, saka takagadzira zvivezwa zvakasiyana siyana zvebronze kuti iwe usarudze.
Tsika Bronze Mermaid Chivezwa
Tinobvuma zvakavezwa zvebronze mermaid zvivezwa, zvisinei nehukuru, zvinhu kana chimiro, unogona kutenga zvimisikidzo zvaunofarira pano. Kana iwe uchida kuve neakasarudzika mermaid zvivezwa, isu takamirira mazano ako.
Nyanzvi yekugadzira Chigadzirwa
Tine yedu pachedu yekugadzira yendarira fekitori uye mazhinji nyanzvi hunyanzvi masters. Isu tinokupa iwe mafoto panguva yekugadzirwa uye woenderera nekugadzira nemvumo yako. Isu tinotengesa kunze kwenyika zvivezwa zvendarira, zvisinei kuti uripi, tichazvikumikidza kwauri nenguva
Mubvunzo: Wngowani ndiyo inofungidzirwa nguva yekuendesa?
A: Mukati 30 mazuva akatevera toraing pasi-mubhadharo.
Mubvunzo: Which nguva yekubhadharas inogona kugamuchirwa?
A:1.Na T / T.. 30% ndizvo dhipoziti uye 70% ndizvo akabhadhara pamusoro pekutendera kugadzirwa.
2.Na L / C.. Inofanira kuva pakuona nebhangi rinozivikanwa.
3.Western Union kana Paypal yemuenzaniso mutengo.
Mubvunzo: Chii tiye mhando garandi?
A: 1.Marble hunyanzvi zvinoenderana nemhando mbiri.
a) ASTM C503-05 uye ASTM C1526-03 yakashandiswa marble chaiwo of Quarry.
b) Senoridhi mhizha mhando standard kana vatengi ' chikumbiro.
2.Ndarira kana simbi isina chinhu inoenderana nematanho maviri.
a) Sezvazviri neshumo yekuongorora zvinhu kubva kugadziri.
b)Senoridhi mhizha mhando standard kana vatengi ' chikumbiro.
3.Strict uye nyanzvi yemhando yepamusoro manejimendi unokwanisa gamuchira bato rechitatu'kuongorora, senge SGS kana nezvimwewo.
Mubvunzo: Wngowani ndiyo Mari yekufambisa?
A: Mari inodiwa 1.yekufambisa kwegungwa kana nendege kubva kumberi.
2. Gamuchira basa reDDU nemutengo unonzwisisika.
Pashure: Kupisa kutengesa kushongedza ibwe gadheni zvigadzirwa mvura yemarble kerubhi tsime
Zvadaro: Yemazuva ano dombo rebwe rechisikwa raishandisa marble ekunze matsime emvura ari kutengeswa
New chigadzirwa decoration chakagadzirwa mapopoma fou ...
Ruoko rwakavezwa rwekunze machena madziro matsime ibwe ...
Hot kutengesa machena bindu chifananidzo kunze kwemvura fou ...
Bindu uye Kumba White Marble Wall Tsime
Metal chifananidzo indoor yekushongedza yendarira Buddha wa ...